डा. केसीका मागमा जुटेन सहमति, सरकारले मार्ने नियत देखाएको आरोप - Everest Dainik - News from Nepal
डा. केसीका मागमा जुटेन सहमति, सरकारले मार्ने नियत देखाएको आरोप
काठमाडौं: सरकार र वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसी पक्षबीचको शुक्रबार अबेर राति भएको वार्तामा कुनै सहमति बन्न सकेन ।
बिहीबार भएको वार्तामा सहमति नजिक पुगेको भनिएकामा शुक्रबार वार्ता नै अबेर मात्र थालिएको थियो । शुक्रबार साँझ ९ बजेदेखि सिंहदरवारमा बसेको वार्ताले निष्कर्ष निकाल्ने अपेक्षा गरिएपनि अन्त्यमा निष्कर्षविहीन भएको थियो।
बिहीबार दुवै पक्षबीच सहमतिका लागि मस्यौदा तयार भएकाले शुक्रबार सहमति हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको थियो।
डा. केसी पक्ष दिनभर वार्ताका लागि कुरिरहेपनि सरकारी पक्षले आलटाल गर्दा अबेर मात्र दुई पक्षबीच वार्ता भएको थियो ।
तर त्यो वार्तामा पनि सहमति बन्न नसकेको हो । केसी पक्षले सरकार आलटाल गरेर डा. केसीको स्वास्थ्य जोखिममा पार्न चाहिरहेको आरोप लगाएका छन् ।
शुक्रबार राती करिब ११ बजे त्रिवि शिक्षण अस्तपाल परिसरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर डा केसी पक्षले यस्तो आरोप लगाएको हो।
‘सरकारले वार्ता गरेजस्तो गरेर छलछाम मात्र पारेको गरेको देखियो। डा केसी मरे मरोस् भन्ने सरकारको नियत देखिएको छ,’ डा केसीका तर्फबाट वार्ता टोलीका संयोजक डा जीवन क्षेत्रीले पत्रकार सम्मेलनमा भने।
अब डा केसी पक्षले सबै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगमा आन्दोलन चर्काउने समेत उनले चेतावनी दिए। यसबाट उत्पन्न हुने असहज परिस्थितिका लागि सरकार जिम्मेवार हुनेसमेत उनको चेतावनी छ।
शिक्षामन्त्री गरिराजमणि पोखरेलले डा केसीप्रति दुराशय राखेको, आफ्नै वार्ता टोलीसँग सम्पर्कविहीन भएको, डा केसीबारे दुष्प्रचार गरेको आरोप, डा केसीको जीवनलाई खतरामा पार्ने नियत राखेको समेत डा केसी पक्षको आरोप छ।
सरकारी वार्ता टोलीले भने डा. केसीको गिर्दो स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकार रहेको र संवेदनशील भएर वार्ता भइरहेको भन्दै सहमति हुने उल्लेख गरेको छ ।
दुई पक्षबीचको संवाद निष्कर्षहीन हुँदा उता डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था भने निकै गम्भीर भएको छ । उहाँको मुटुमै समस्या देखिन थालेको भन्दै चिकित्सकहरुले हृदयाघातको त्रास बढेको बताएका छन् ।
सरकारले शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनाली नेतृत्वमा डा. केसी पक्षसँग वार्ता गर्न टोली बनाएको थियो ।
उक्त टोली र डा. जीवन क्षेत्री नेतृत्वको केसी पक्षीय वार्ता टोलीबीच बिहीबार झण्डै दश घण्टा वार्ता भएको थियो ।
जुम्लाबाट सत्याग्रह थाल्नु भएका डा. केसी ६ बुँदे मागसहित २७ दिनदेखि अनशनरत हुनुहुन्छ ।